Karate – Tompondaka erantany: mianadahy no hisolo tena an’i Madagasikara | NewsMada
Karate – Tompondaka erantany: mianadahy no hisolo tena an’i Madagasikara
Nihena ho 2 ny mpikatroka malagasy hiatrika ny fiadiana ny tompondaka erantany ny taranja karate, hanomboka ny talata 6 novambra ho avy izao any Madrid, raha toa ka 3 izany tany am-piandohana. Nigadona tany Paris, ny asabotsy lasa teo, tokony ho tamin’ny 1 ora maraina ny delegasiona malagasy.
Mpikatroka miisa 2, dia i Rijaharitiana Fenosoa Patrick sy i Ainamampionona Felanandrasana Lalaina ihany no nahazo ny tapakila nihazo an’i Madrid. Izy mianadahy ireo izay efa samy manana traikefa tokoa ary nahafeno ny fepetra hahafahana miatrika izao fifaninanana goavambe izao. I Patrick manokana dia efa in-telo no nisalotra ny maha tompondakan’i Madagasikara azy, teo amin’ny sokajy lehilahy latsaky ny 75 kg. Nisesisy ary maro ihany koa ny fandresena azon’i Felana teto Madagasikara. Efa impolo izy izao no nahazo ny anaram-boninahitra maha tompondaka azy teo amin’ity taranja ity. Manantena ny hitondra avo ny voninahitr’i Madagasikara, araka izany, ireto solontena malagasy.
Marihina fa izy mianadahy ireto dia tarihin’ny mpanazatra azy, Rafaliarisaka Danielle sy ny solontena miisa 2 avy amin’ny TEM (Tous Ensemble pour Madagascar). Ity farany izay nanolo-tanana ka nahafahanan’i Madagasikara hiatrika ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny taranja karate izao. 5 araka izany no mandrafitra ny delegasiona malagasy any Madrid.